Veloma any amin'ny Unity 2D | Avy amin'ny Linux
Raha mipoitra avy any amin'ny farany izy vaovao farany ny fonosana "Ubuntu-meta" avy amin'ny trano fitahirizana Ubuntu Quantal Quetzal, Firaisankina 2D Tsy apetraka intsony amin'ny alàlan'ny default, ary ny mpampiasa Unity 2D dia mila mifindra amin'ny session Unity 3D, araka ny voaresaka ao amin'ny UDS-Q.
Ankoatr'izay, ao amin'ny fonosana Unity farany, nakarina tao amin'ny tahiry Ubuntu Quantal ora vitsy lasa izay, fonosana Unity 2D dia voatahiry saingy tsy misy vokany izany, noho izany dia azo lazaina fa tsy misy intsony ny Unity 2D ao amin'ireo trano fitahirizana fa tsy izany. afaka mametraka eo amin'ny Ubuntu 12.10 mihitsy.
Ireo mpampiasa Ubuntu tsy misy fanafainganana sary dia afaka mampiasa Unity 3D noho ny llvmpipe, ka tsy hisy ny session fallback ary hisy Unity tokana ho an'ny mpampiasa rehetra.
Toa fanapahan-kevitra amin'ny heviny marina izany satria ny Unity 2D dia tsy namoy ny antony nahatonga azy. Tadidio fa ny Unity 2D dia noforonina sy natao hampiasaina amin'ny solosaina tsy misy fanafainganana 3D, izay midika fa rehefa manandrana mametraka Ubuntu amin'ny milina misy famaritana ara-teknika ambany dia navily lalana ho any Unity 2D, ahafahan'ny mpampiasa mankafy Ubuntu amin'ny Masinina "taloha" misy karatra sary tsy dia matanjaka loatra.
Amin'izany fomba izany dia antenaina hampivondrona ny ezaka fampandrosoana iray manontolo amin'ny tetikasa tokana. Ho fanampin'izay, tombanana fa amin'ity fomba ity ny tatitra momba ny lesoka, ny fandraisana anjaran'ny patch, ny tolo-kevitry ny fanavaozana vaovao, sns. Tsy lazaina intsony fa hanolotra ny mpampiasa amin'ny interface tokana sy homogeneous izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Veloma any amin'ny Unity 2D
Pablo Gomez Alvarez dia hoy izy:
Entanina kely kokoa ny olona hanova distro, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Pablo Gómez Álvarez
Oscar Israel Roman Quispe dia hoy izy:
Ny andalana faha-3 dia midika fa hanala ny Gnome-Fallback ???
Valiny tamin'i Oscar Israel Román Quispe
Saito Mordraw dia hoy izy:
Fanapahan-kevitra voajanahary ho an'ny Canonical: Unity no vokatra sahanin'izy ireo ary mikasa ny hampivondrona -: p - ezaka manodidina azy ireo izy ireo. Raha tsara ho an'ny mpampiasa izany, tongasoa.
Etsy ankilany, ao amin'ny xfce + ubuntu, ny olana nanjo ahy rehefa nanolo ny xfwm tamin'ny compiz ho mpitantana varavarankely (izay indraindray nahantona ny rafitra nandritra ny segondra roa). Mankanesa eo amin'ny sisin'ny xubuntero amin'ny hery: 3
P.S. Tena tiako ny endrika vaovao an'ny pejy. = D
varrtto dia hoy izy:
Inona ny fandaniam-poana ataon'ny canonika, nahoana izy ireo no nihazona ny Unity 2d 1 taona? Ho nametraka bateria tamina zavatra mahasoa kokoa izy ireo ary nanemotra ny famoahana ny firaisankina.
Mamaly an'i varrtto
Ary ahoana ny amin'ny Ubuntu te hiverina amin'ny interface Gnome 2 toa azy?
Debian feno 19 taona androany